China Malaria Pf Rapid Test Kit fekitari uye bhizimisi | ZVINOKOSHA
Iyo Malaria Pf Ag Rapid Bvunzo ndeye lateral kuyerera chromatographic immunoassay yehunhu hwekuonekwa kwePlasmodium falciparum (Pf) chaiyo protein, Histidine-Rich Protein II (pHRP-II), muropa revanhu. Ichi chishandiso chakagadzirirwa kushandiswa sekuyedza kuongorora uye sechibatsiro pakuonekwa kwehutachiona neplasmodium. Chero chipi zvacho chinoita zvekuita neMalaria Pf Ag Rapid Test chinofanira kusimbiswa nedzimwe nzira dzekuyedza (s) uye zvekuwana zvipatara.
Iyo Malaria Pf Ag Rapid Bvunzo ndeye lateral kuyerera chromatographic immunoassay. Iyo bvunzo yekubvisa zvinhu inosanganisira: 1) burgundy yakaiswa conjugate pad ine monoclonal anti- pHRP-II antibody yakasanganiswa necolloid goridhe （pHRP II-goridhe conjugates), 2) nitrocellulose membrane tambo ine bvunzo bhendi (Pf) uye kutonga bhendi (C bhendi). Iyo Pf bhendi yakagara yakaputirwa ne polyclonal anti-pHRP-II antibodies, uye iyo C bhendi yakagara yakavharwa nembudzi inorwisa-mbeva IgG.
2. 25 x 5 µL mini mapurasitiki anodonhedza.
Chigadzirwa Chigadzirwa Malaria Pf Ag Rapid Bvunzo
Pashure: Malaria Pf Pv Rapid Kwayedza Kit
Zvadaro: Disposable zvakabudiswa Tube
Nhanho 1: Uya nemuenzaniso uye zviyero zvekuyedza kutonhorera remukati kana firiji kana chando. Sanganisa iyo
specimen zvakanaka pamberi peyedzo yakambonyungudutswa. Ropa richaputirwa mushure mekunyungudika.
Nhanho 2: Kana wagadzirira kuyedza, vhura homwe pane notch uye bvisa chishandiso. Isa chimbo chekuyedza pa
nzvimbo yakachena, yakati sandara.
Nhanho 4: Zadza iyo mini plastiki kudonhedza neropa specimen kuti usapfuure iyo specimen mutsara sezvakaratidzwa mumufananidzo unotevera. Huwandu hweiyo specimen hwakatenderedza 5 aroundL.
Kubata iyo yekudonha yakatwasuka, govera zvese zveiyo specimen pakati penzvimbo yacho
kuve nechokwadi chekuti hapana mhepo dzemhepo.
Nhanho 6: Mhedzisiro inogona kuverengwa mumaminetsi gumi nemashanu kusvika makumi matatu. Zvinotora maminetsi anopfuura gumi nemashanu kuti mamiriro acho anyatsojeka.
Usaverenge zvawanikwa mushure memaminitsi makumi matatu. Kuti udzivise kuvhiringidzika, rasa bvunzo mudziyo mushure mekududzira mhedzisiro
NEGATIVE RESULT: Kana chete iyo C bhendi yakagadziridzwa, iyo bvunzo inoratidza kuti hapana inoonekwa pHRP-II antigen inopa mune iyo specimen. Mhedzisiro yacho haina kunaka.
POSITIVE RESULT: Kana ese ari maviri C uye Pf mabhendi akagadzirwa, iyo bvunzo inoratidza kuvepo kwepHRP-II antigen. Mhedzisiro ndeye Pf yakanaka.Samples ine mhedzisiro mhedzisiro inofanirwa kusimbiswa neimwe nzira yekuyedza nzira (s) uye zvekuchipatara zvakawanikwa pamberi pesarudzo yakanaka inoitwa
INVALID: Kana pasina C bhendi rakagadzirwa, iyo assay haina kukodzera zvisinei chero burgundy ruvara mune Pf bhendi sezvakaratidzwa pazasi. Dzokorora chiyero nechigadzirwa chitsva.